VACC10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 10000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC10000
VACC10000 Purified water filtration system is distributed by Viet An Company. The system has compact and cost-saving design.
VACC10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာ စနစ်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ သိပ်သည်းပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
We offer free shipping-installation nationwide withawarranty of 12 months.
Currently, there areawide range of smart purified bottled water manufacturing and purified water filtration systems with high capacity. However, VACC10000 bottled water filtration line is still the most chosen product.
ကျွန်တော်တို့က တစ်နိုင်ငံလုံးကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်တပ်ဆင်ပေးပြီး ၁၂ လ အာမခံချက်ပေးပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မတူညီတဲ့ စစ်ထုတ်ကိရိယာတွေ မျိုးစုံရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း VACC10000 စက်က ရွေးချယ်မှု အများဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The product is suitable for the large-scaled manufacturers. It is produced according to ISO 9001:2015 standard.
ဒီစက်က ထုတ်လုပ်မှု မြောက်မြားစွာလုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
If you are looking forawater filtration system of high capacity, our VACC10000 Purified water filtration system will be the best choice for you.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VACC10000 က အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
The automatic filling and filter systems constitute this 10000L/h water filtration line. The systems consist of:
အော်တိုလောင်းဖြည့် စစ်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်တွေမှာ တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စစ်ထုတ်လိုင်း ပါရှိပါတယ်။
A push pump system to generate pressure onto the filtration system, pushing water through the raw filter tanks
တွန်းအားရေစုပ်စက်စနစ်က စစ်ထုတ်စနစ်ပေါ်မှာ ဖိအားထုတ်ပေးဖို့နဲ့ ရေကို ရေအစိမ်းစစ်ထုတ်ပေးတဲ့ တိုင်ကီတွေဆီ စုပ်တင်ဖို့ သုံးပါတယ်။
An air disinfection system to kill the bacteria remained in the air and createdasterile environment.
လေပိုးသတ်စနစ်က လေထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သတ်ပေးပြီး ပိုးသတ်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
A pre-filter system to filter dirt and sludge from the filter housing and the stainless steel filter cartridge.
အကြို စစ်ထုတ်ကိရိယာက စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်နဲ့ စတိန်းလက်စတီး စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိမ်မှ အညစ်အကြေးတွေကို စစ်ထုတ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
A heavy metal filter system of the system includesacomposite filter tank,3gate adjustable valve, filter sand and gravel to filter and remove metals, alum, impurities from the water.
ကြီးမားသော သတ္တုများ စစ်ထုတ်ပေးသော စနစ်မှာ သတ္တုတွေ၊ ကျောက်ချဉ်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ပေါင်းစပ်တိုင်ကီ၊ ၃ ဂိတ်အဆို့၊ သဲ စစ်ထုတ်ကိရိယာတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
A detoxification, decontamination and deodorizing filter system consisting of Composite tanks, filter gravel anda3 gate valve. Activated carbon is also included for detoxification, decontamination and deodorizing
ရောဂါပိုးမွှား အနံ့အသက်တွေကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ စနစ်မှာ စုပေါင်းတိုင်ကီများ၊ ကျောက်စရစ်စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ ၃ ဂိတ်အဆို့တို့ ပါရှိပါတယ်။ အနံ့အသက် ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ ကာဗွန်လည်း ပါပါတယ်။
A limestone removal system and water softener system witha3 gate valve, ion exchange resin and Composite tank to remove limestone precipitated in water, soften the water and help protect the RO filtration system in the next step.
ထုံးကျောက်ဖယ်ရှားပေးတဲ့ စနစ်နဲ့ ရေကို ပျော့စေတဲ့ စနစ်မှာ ရေထဲက ထုံးကျောက်တွေကို ဖယ်ရှားပြီး ရေကို ပျော့စေရန်နဲ့ နောက်တဆင့်မှာ RO ရေစစ်စနစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ၂ ဂိတ်စနစ်၊ အစေးချိန်းပေးသော အိုင်ယွန်၊ စုပေါင်းတိုင်ကီတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
A complicated designed RO membrane system withabooster pump, nacelle and pure RO membrane. A flow meter,apressure gauge, an oil pressure gauge, an electronic valve, reconstituted salt and an automatic electronic cabinets
RO အလွှာပါးစနစ်မှာ အားပြင်းရေစုပ်စက် သန့်ရှင်းသော RO အလွှာပါး၊ စီးဆင်းသော မီတာ၊ ဆီဖိအားတိုင်းကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်အဆို့၊ ပြန်ပေါင်းပေးသော ဆားနဲ့ အော်တို လျှပ်စစ် အကန့်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
A bactericidal system and bacteria filter with UV lamp, Ozone machine to remove all bacteria during transferring the water from RO membrane system to the tank.
ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာမှာ ရေကို အလွှာစနစ်မှ တိုင်ကီဆီ ပို့နေစဉ် ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ UV အလင်းရောင်နဲ့ အိုဇုန်းပါပါတယ်။
A support fame and other accessories for installation
တပ်ဆင်ရန် ဖရိန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ
5 reasons why you should chooseaVACC10000 Purified water filtration system
VACC10000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သုံးသင့်သည့် အကြောင်းပြချက် ၅ ခု
The system is produced according to American technology and ISO 9001:2015 standards. The components are all genuine with clear origin. The product is directly imported and has been recognized as exclusive brand names of VA, USApec No. 250969 and No. 250970 by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam.
The filtration process is totally closed and automatic withahigh capacity of 10,000L/hour.
ဒီစက်ကို အမေရိကန် နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးက စစ်မှန်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားပြီး ဗီယက်နမ် မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ VA, USApec တံဆိပ်များဖြင့် မူပိုင်ခွင့် No. 250969 နဲ့ No. 250970 အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
+ Quick filtration, ensuring standards for pure water
With advanced improvement, the system is capable of producing up to 10,000L/hour. This capacity is suitable for the purified bottled water manufacturers of large scale, the apartment, restaurants, schools and factories.
The finished product meets 6-1-2010/BYT standards of the Ministry of Health and FDA standards of the United States.
တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာနဲ့အတူ ဒီစနစ်က တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀၀ လီတာ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုက်ခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ စက်ရုံတွေလို ရေဘူးအများကြီးလိုတဲ့ နေရာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ပစ္စည်းက ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ 6-1-2010/BYT စည်းမျဉ်းနှင့်၊ US ရဲ့ FDA စံနှုန်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
Asaleading company specializing in importing and distributing the water filtration system, we are offering 5-10% cheaper than other suppliers in the market.
For price references of all VA’s products, go to https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc
ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေကို တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီက ပစ္စည်းတွေက အခြားထက် ၅-၁၀% ပို သက်သာပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကို သိချင်ရင်တော့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Currently, there arealot of products with unclear origin and bad quality. With 20 years of establishment and development, we are committed to our product origin and quality assurance.Our motto is “Say no to fake goods”. Therefore, the customers can be completely assured when using our products.
ယခုအခါမှာ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရမ်းများလာပါတယ်။ နှစ် ၂၀ ကျော် တိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်း အရည်အသွေးကို အာမခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က ပစ္စည်းအတုတွေကို နိုးလို့ ပြောခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Considering the customers as the core value, we always put the customers’ first and try our best to provide the customers with the best services. We offer free shipping-installation nationwide,awarranty period of 12 years andalifelong maintenance. In addition, after this product, we also apply incentive prices for all filter material and components that the customers purchase later.
ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အမြဲတမ်း ဦးစားပေးပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်တပ်ဆင်ပေးတယ်။ ၁၂ နှစ်အာမခံချက်နဲ့ တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းမှု ပေးပါတယ်။
For more information about our water filtration systems of high capacity, call us now at 0949 414141. We are available 24/7 and 365 days/year.
ပိုမို သိရှိချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။
VAQGF600 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine isahigh-capacity machine suitable for 20L pure water bottling manufacturers. Daily capacity can be up to 600 5G bottles per hour. Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine isahigh-capacity machine suitable for 20L pure water bottling manufacturers. Daily capacity can be up to 600 5G bottle per hour. The machine applies the most advanced technology of the United States and is made according to ISO 9001:2015 standard. It is manufactured, imported and distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company and exported to ASEAN countries.
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 10 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ 10 pc VA/ USApec
73gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့ 1 1 VA/ USApec
8 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ 1 1 VA/ USApec
10 Activated carbon ကာဗွန် full liter Holland
18 RO membrane RO အလွှာပါ6းpc Hitech-USA/CSM Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ်4pc Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်3pc VA/ USApec
277core filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်7pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 10000 10000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်